केशर रोका ! जसको पत्रकारिताले गरिवको जीवन फेरिए – कामना डेली
केशर रोका ! जसको पत्रकारिताले गरिवको जीवन फेरिए
On २०७७ चैत्र २३, सोमबार २०:५३ Last updated Apr 6, 2021
कामना डेली, प्यूठान । मोफसलको पत्रकारितामा धेरैले सुनेको नाम हो, केशर रोका । खासगरी छापा पत्रकारितामा यो नाम धेरैले पढ्ने गरेका छन् । पत्रकारितामा लेखकको नाम पढ्नु त्यति नौलो विषय पनि होइन्, तर यो नाम नाममा मात्र सिमित छैन् । यहि नाम हो जसको पत्रकारिताले धेरै गरिवका जीवन फेरिए । लुम्विनी प्रदेशमा कार्यथलो बनाएका रोका प्यूठान झिमरुक गाउँपालिका निवासी हुन् ।
उहाँले समाचार अखवारमा छापिएकै कारण घरबार विहिन बनेकाहरुको घर बन्यो । बेसहारा बनेकाहरुले साहारा पाए । लाखौँ रुपैयाँ सहयोेग जुट्यो । पैसा नभएकै कारण पढाईमा पूर्ण विराम लागेकाहरुको पढाइले निरन्तरता पायो ।
झिमरुक गाउँपालिका ४ प्यूठानका तीन खड्का दिदिवहिनी गंगा, समिक्षा र सावित्रा जसका बुवा आमा कलिलै उमेरमा गुमे । बेसाहारा बनेपछि जीन्दगीका गोरेटाहरु अँधुरै रहने भए । यही खवर अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएपछि उनीहरुलाई सहयोग गर्नेहरु सयौँ भेटिए ।
भत्किएको घरमा गुँजारा कटाइरहेका प्यूठान नगरपालिका ६ माझकोटका टुहुरा दाजुभाईहरुको घरै बन्यो । पढाईमा तिक्षण भएर पनि एसइइ पछि अध्ययनमा पूर्ण विराम लाग्न थालिसकेको झिमरुक गाउँपालिका ४ बांगेमरोठका सागर विक्रम जिसीले उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क पढिरहेका छन् । काठमाण्डौँको क्यानभास इन्टरनेश्नल कलेजमा उनलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
यी एउटा प्रतिनिधीमुलक खवर मात्र हुन् । केशरले लेखेका समाचारले सयौँ गरिवहरुको जिन्दगी फेरिएको छ । आवाज विहिनहरुको आवाज आम संचारमाध्यममा आएका छन् ।
रोका विगत दश वर्षदेखि नियमित पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् । उनको पत्रकारिताको शुरुवात प्यूठानस्थित सामुदायिक रेडियो प्यूठानबाट भयो । रेडियोबाट पत्रकारिता थालेका उनले ६ महिनापछि छापा माध्यमको यात्रामा प्रवेश गरे । प्यूठानकै प्यूठान समाचार दैनिकहुँदै, दाङको यूगवोध दैनिक, राप्ती पोष्ट दैनिक, सुर्खेतको सुर्खेत पहिचान दैनिक, आर्थिक अभियान दैनिक हुँदै हाल उनी अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक र बुटवल टुडे दैनिकमा कार्यरत छन् । उनी आफैँ प्रकाशक र प्रधान सम्पादक भएर आजको पोष्ट डटकम अनलाईन न्यूज पोर्टल पनि संचालन गरेका छन् ।
मोफसलको पत्रकारितामा स्थापित भएका रोका नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्विनी प्रदेशमा खुल्ला सदस्य पदमा यसपाली उमेदवारी दिएका छन् । श्रमजीवीहरुको छाता संगठनमा श्रमजीवीकै नेतृत्व हुनुपर्छ, र मात्र उनीहरुको वास्तविक पीडा सुनुवाई हुनसक्दछ भन्नका लागि उनले सदस्यमा उमेदवारी दिएको बताएका छन् । उनी व्यवसायिक साझा प्यानलका अध्यक्ष उमेदवार भरत केसी नेतृत्वको प्यानलबाट उमेदवारी दिएका हुन् ।
बर्दियामा माहुतेलाई मार्ने पाटेबाघ नियन्त्रणमा
१४ वर्षमै विवाह : छोरा जन्माउनुपर्ने दबाब, चौथौँ सन्तान जन्माउँदा मृत्यु
स्वर्गद्वारी जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा दुख व्यक्त